Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Callum Wilson Childhood Story Plus Ihe omuma ihe omuma
LifeBogger na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha na aha "GOal Machine".
Anyị Callum Wilson Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na -ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Nyocha a gụnyere akụkọ ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ebili na akụkọ ama ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye na-agbapụta ihe mgbaru ọsọ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Callum Wilson, nke na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ugbu a na-enweghị n'ihu ọha, ka Malite.
Callum Wilson Childhood Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite, aha ya bụ Callum Eddie Graham Wilson. Callum Wilson, dị ka a maara ya, mụrụ na Thbọchị 27th nke February 1992 na nna Jamaica na nne Bekee na Coventry, United Kingdom.
N'adịghị ka ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na Britain, Wilson enweghị mgbe ọ bụ nwata. Nna ya Jamaica hapụrụ ya na mama ya mgbe ọ bụ nwa ọhụrụ.
Nwa obula nke biri site na nkpakorita nke ndi nne na nna karia ka nna ya lara ga-amata nke oma ihe mgbu nke obi puru ime. Nke a bụ isi okwu banyere akụkọ ndụ nwata nke Callum Wilson.
Wilson tolitere naanị ya na nne ya nke nwere ụmụ ise ndị ọzọ, ụmụnne atọ na ụmụnne nwanyị abụọ. Ndụ nwata ya nwere nnukwu nsogbu.
Ka o sina dị, ọ mụtara ka esi eguzo n'ụkwụ ya abụọ na -enweghị onye nna gburugburu. Emere nke a iji setịpụrụ ụmụnne ya ihe atụ.
Callum Wilson Childhood Akụkọ - Ntọala Ule:
Ná mmalite, ikere òkè Wilson na egwuregwu bọọlụ mere ka ọ pụọ na nhọrọ adịghị mma ọ gaara eme mgbe ọ bụ nwata.
Ọ malitere njem njem bọọlụ ya na nnwale na -aga nke ọma na Coventry. N'adịghị ka ndị egwuregwu ụmụaka ndị ọzọ, Callum enweghị ihe mgbapụta site na nne na nna ya na nke a, nne ya. N'okwu ya;
Nne m juputara na aka. Ọ na -esiri m ike mgbe m na -etolite ka ọ kpọrọ m gaa ọzụzụ.
Ọ bụ nne naanị ya nwere ọtụtụ nsogbu na ya.
Ọ bụ ndị enyi ezinụlọ na ndị otu egwuregwu kpọbatara m n'ala ọzụzụ.
Wilson n'oge ụfọdụ enweghị ahụ iru ala dịka o chere na ọ na-aghọ ibu arọ nye ndị na-enyere ya aka.
Inwe afọ ojuju na ịdabere na ndị mmadụ maka ibuli elu mere ka ọ hapụ ọzụzụ ya ka ọ kpọọ otu egwuregwu Sunday nke mpaghara ya.
N'agbanyeghị mgbanwe nke uche, Wilson ka na -enwetaghị afọ ojuju ọ chọrọ mgbe ọ na -egwu maka Njikọ Sọnde. O chere na ya emeela nhọrọ ọjọọ nke ga -emebi ohere ọ nwere ịghọ ọkachamara n'ịgba bọọlụ.
N'oge ahụ, o nwere nrọ ya ka ọ bụrụ onye pro, na -enweta nnukwu ego na ilekọta ndị ezinaụlọ ya.
Echiche na -adịgide adịgide na nke a kpaliri Wilson ịhapụ ịgba bọọlụ Sọnde wee laghachite Coventry maka ule. N'ikwu okwu banyere ahụmịhe a, o kwuru otu oge n'okwu ya;
Agbalịrị m ọzọ mgbe m bụ 12, enweghị m mmasị na ya, alaghachiri m na ndị otu Sọnde m ọzọ.
Oge nke atọ m matara na ọ bụrụ na m chọrọ ịbụ ọkachamara, m ga -agbariri ya elu wee bupụ ndị ọzọ.
Mkpebi ikpeazụ nke Wilson ka ọ nọrọ na Coventry kara akara mmalite nke ọrụ ọrụ ya.
Akụkọ nwata Harry Wilson gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-adịghị ekwu okwu
Akụkọ ndụ Callum Wilson - Ịhapụ ụlọ:
Wilson mgbe nnwale nke ọma nke atọ ya na Coventry kpebiri ịrapara na klọb ndị ntorobịa.
Dịka onye na-eto eto na-eto eto, ihe niile Callum chọrọ bụ inwe ebe obibi nke ya n'ihi oke mmadụ dị n'ebe obibi ezinụlọ ya.
Ibi n'ebe obibi pụtara na a gaghị enwe ihe ndọpụ uche. Football mechara bụrụ ezigbo ihe kpatara nne ya ji hapụ ya n'ụlọ.
Mgbe a hapụsịrị ya, Wilson chọtara ọtụtụ ohere na oge isoro ndị enyi ya nọrọ ma bụrụ onwe ya. N'ikwu okwu banyere mkpebi ya, Wilson kwuru otu oge;
Adị m onye ugbu a na-amasị ụlọ ọrụ m. Ọ dị mma inwe ike inwe nnwere onwe na udo.
Ultba ụba n'egwuregwu:
Wilson mgbe ọ nọ na ntọala ndị ntorobịa Coventry ka enyere ohere ịgba bọọlụ ọtụtụ egwuregwu na egwuregwu ndị ọzọ.
Dị ka akụkọ si kwuo, ọ sonyere n'ịkụ ọkpọ maka afọ ole na ole. N'ikwu banyere ahụmịhe ọkpọ ọkpọ ya, ọ sịrị otu oge;
Naanị m nwere ọgụ atọ. N'ụzọ doro anya, m meriri atọ ahụ. Ọ bụ site na kọntaktị knockout. na afọ ahụ, ahụrụ m onwe m na-eme ka ndị iro m tie mkpu ike mgbe m bitara ha ịlụ agha.
Ọ bụ ezie na Wilson ekweghị ka Kickboxing jidere ya kpamkpam ka ọ na-ele anya ya n'ọchịchọ kasịnụ nke ịghọ ọkachamara ọkachamara. Otú ọ dị, ọ bụ ọgwụ ndị ahụ na kickboxing na-eme ka ọ sie ike.
Akụkọ ndụ Callum Wilson - mmalite siri ike ka ọ bụrụ ọkachamara:
N'oge ụfọdụ, Wilson hapụrụ ụlọ ezinụlọ ya na nleta otu ugboro n'ọnwa. Ọ nọrọ n'ụlọ obibi Coventry ya, amaghị etu esi esi nri ọ ga-eri wepu nri ụbọchị niile.
Nke anri ngwa ngwa ma dị mfe”Ụdị ndụ a laghachiri inye ya nsogbu. Iri ọtụtụ burgers agbadaghị nke ọma na mkpa egwuregwu ya.
Nke a hụrụ Wilson na mbido ọrụ agadi ya na -agba mbọ ka ọ dị mma yana ọbụna gbajie ụkwụ ya ugboro atọ.
Mmerụ ahụ na -adịgide adịgide hụrụ ọganihu ya na Coventry City mebiri site n'egwu maka ọrụ ya na nrọ na -abịa na njedebe na mberede.
Callum Wilson Bio - ka ịhụnanya siri zọpụta ya:
N'ụzọ dị ịtụnanya, Mmerụ ahụ Wilson nwere n'oge ọ malitere ihichapụ ozugbo site na mgbe ọ chọtara onwe ya enyi nwanyị nke gosiri ya ka esi eri nri dị ka onye na -eme egwuregwu.
Nke a bụ oge ọ malitere ịbanye na onye ọkpụkpọ ụwa mechara mata.
Wilson zutere onye ibe ya aha ya bụ Stacey mgbe ọ bụ 17 na ọ bụ 19 (afọ abụọ tọọ ya). Stacey kwụsịrị Wilson iri nri iri nri nke ọ kpọrọ ngwa ngwa ma dịkwa mfe.
Mgbe ihe dị ka otu afọ nke ịnọ ọnụ, Wilson kwagara n'ụlọ ya nke nyeere ya aka inwe ọganihu n'ọrụ ya.
Stacey kpọbatara ya salads na nri dị mma, site na mgbe ahụ, mmerụ ahụ ya na -enwe nsogbu na -adịgide adịgide mechara nwụọ. Ndị enyi abụọ ahụ kpebiri ịnọ afọ ise ọzọ tupu ha alụọ.
Ha niile nwere nwa nwoke aha ya bụ Oritse na ada Orlagh.
Biography Callum Wilson - Bilie na Ama:
Ewezuga itinye aka Stacey na ịhụnanya na ndụ ọrụ ya, ohere Wilson na Coventry bịara mgbe Steven Pressley ghọrọ onye njikwa ha na 2013.
Ọ masịrị onye njikwa ya na ndị fan ya site n'ịgba ihe mgbaru ọsọ 22 na Njikọ Otu na oge 2013-14.
Ọ dabara na oge mmiri ozuzo ya bụ oge Bournemouth malitere ịchọ onye na-egbu ihe iji dochie ya Lewis Grabban onye rere ya na Norwich City. Ha banyere Wilson maka £ 3.5m na July 2014.
Otu oge ahụ, Eddie Howe malitere ihicha diamond siri ike na goolu iri abụọ na atọ nke Wilson nyeere Bournemouth aka inweta aha asọmpi.
Callum Wilson Ndụ nke Onwe:
Wilson dị enyi ma na-arụ ọrụ, na-achịkwa ọchị ma na-egwu egwu mgbe nile, ọ na-ekwukwa okwu n'ụzọ doro anya gbasara ezinụlọ ya.
Ọdịdị Nkwado Ụgha: You maara?… Wilson nwere nkwenkwe ụgha banyere uwe elu ya.
Okenye No 13 abughi ndi ochichi ma obughi ya. N'okwu ya;
Agara m maka nọmba 13 n'ihi na ihe ole na ole mere n'ụbọchị 13th nke ọnwa ụfọdụ. Na ụbọchị 13th nke ọnwa ahụ bụ mgbe m gafere ule m na-agba m, nyocha m na nyocha na enwere m ihe mkwọ ụgbọala mbụ m. Ọzọkwa, a mụrụ nwa m nwoke na 13th.
Iri abụọ na abụọ bụ nọmba ọzọ dị mkpa. N'ikwu okwu na nke ahụ, Wilson kwuru otu oge;
Oge ọ bụla m lere anya na ekwentị mkpanaka m tupu ị lakpuo, ọ na - ekwu 22: 22. Echere m na ihe ahụ ga-eme n'ọdịnihu. N'ịbụ ihe na-eju anya mgbe ọ na-eme, eburu m ihe mgbaru ọsọ 22 maka Coventry.
Egwuregwu egwuregwu sitere na Ezinụlọ:
Nleba anya n'ọsọ Callum Wilson na-enye nghọta gbasara ezinaụlọ ya ndị Jamaica. Nghọta ahụ na-egosi na o ketara ọsọ ọsọ ya n'aka nna ya gbapụrụ agbapụ.
N'ikwu okwu banyere ọsọ, nna na ezinụlọ, Callum kwuru otu oge;
Amaghị m ihe ọ bụla banyere nna m. Amaghị m nke ọma banyere nzụlite ya. Ọ bụ Jamaican na Jamaicans na-abụkarị ihe egwuregwu. Ị hụla Usain Bolt.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị bụ Callum Wilson Childhood akụkọ tinyere akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.